FAAH-FAAHIN: Heshiiska Shidaalka Ee Itoobiya La Gashay POLY-GCL Iyo Saamiga Shirkada - Jigjiga Online
HomeSomalidaFAAH-FAAHIN: Heshiiska Shidaalka Ee Itoobiya La Gashay POLY-GCL Iyo Saamiga Shirkada
FAAH-FAAHIN: Heshiiska Shidaalka Ee Itoobiya La Gashay POLY-GCL Iyo Saamiga Shirkada
Sanadkii 2013 waxay shirkada POLY-GCL ee wadanka shiinaha iyo wasaarada macdanta itoobiya kala saxeexdeen heshiiska qodista iyo soo saarista shidaalka ceelasha Calub iyo Hilala oo Gaadhaya 93,000sqkm islamarkaana uu kujiro 8 trillion cubic Feet, oo gaas dabiici ah.
Heshiiskan waxa uu dhigayay in shirkada POLY-GCL ay shidaalkan kukharash garayso aduun lacageed oo dhan 4 billion dollar iyadoo itoobiyana carbuun ahaan usiinaysa 100 million dollar oo rahmad ah, waxaa kale oo lagu heshiiyay in shidaalka ay kusoo saarto mudo 5 sano ah islamarkaana ay itoobiya sibuuxda ugu wareejiso 25 sano kadib oo kabilaabanaysa 2013, iyadoo mudada 25ka sano ah ay shirkadu leedahay 30% wax soosaarka shidaalka halka itoobiyana ay leedahay 70%. Waxaa kale oo heshiiska kuxusan in Itoobiya ay shirkada kaqaadanayso canshuurta wax soosaarka, Dulsaarka hantida (Royalty) iyo kirada dhulka.
Sanadkii 2016 waxay itoobiya aas aastay wakaalada ,,Ethiopian Minerals Petroleum and Bio Fuel Corporation,, taasoo kala xaajootay shirkada POLY-GCL 15% oo ay dawlada itoobiya kuyeelanayso saamiga shirkada si markaas shirkada POLY-GCL iyo wakaalada EMPBFC ay shuraako ugu noqdaan saamigii shirkada ee 30% ahaa taasoo dawlada itoobiya yeelanayso 15% halka shirkada POLY-GCL ay iyana 85% yeelanayso,, Fg. arintani waxba kama badalayso heshiiska 30/70 ahaa ee qaybsiga faaiidada wax soosaarka, kaliya dawlada itoobiya ayaa saamigii shirkada 15% kuyeelanaysa oo Dulsaar ah taasoo afka qalaad lagu yidhaahdo (Production Sharing).
Ujeedada shirkadu heshiiskan danbe ula gashay dawlada itoobiya ayaa ah in shaqada shirkada lafududeeyo maadaama ay xukuumada dhexe saami kuleedahay, waxaakale oo ay arintani fudaydisay in bangiyada wadanka shiinihu ay shirkada POLY-GCL siiyaan balaayiin dollar oo dayn ah si ay shaqada mashruuca udhamaystirto maadaama ay damaanada shirkada qayb katahay dawlada itoobiya.
June 2018kii shirkada POLY-GCL iyo itoobiya waxay markale kuheshiiyeen in shirkadu ay soo saarto shidaalka caydhiin (crude oil) kaasoo laga helay 3 ceel oo kuyaala Hilala iyo Calub, inta uu socdo mashruuca soo saarista gaaska dabiiciga ahi, waxayna isla meel dhigeen inay wadaagaan wixii faaiido ah ee kasoo baxda. Iyadoo lafilayay in maalinkii 450 foosto lasoo saaro balse shirkada POLY-GCL ayaa soo saaristan hakisay kadib markii wasaarada macdanta itoobiya ay kuxidhay inay latimaado shati muujinaya in shirkadu shaqadan fasax uhaysato (license),Fg. Arintani maaha mid saamaynaysa qodista iyo soo saarista gaaska dabiiciga ah waayo waa laba kala arimood.
Sanadkii 2017 shirkada POLY-GCL ayaa heshiis is afgarad ah lagashay wadanka Djibouti kaasi oo dhigayay in shirkadu ay maalgashi dhanka dhoofinta shidaalka ah oo gaadhaya 4 billion kasamayso Djibouti, kana dhisto dhuumaha shidaalka qaada, xarun shidaalka sifaysa oo ubadala LNG (Liquified Natural gas) taasi oo laga dhisayo Dameerjoog iyo gacan maraakiibta shidaalku kaqaado oo gaar ah.
February 2019kii ayayna itoobiya iyo Djibouti kala saxeedeen heshiis ufududaynaya in shirkada POLY-GCL ay dhisto dhuumaha shidaalka oo gaadhaya masaafo dhan 1,000km, xarumaha kaydka iyo sifaynta iyo waliba goobta ay maraakiibta shidaalka qaadaysaa kusoo xidhanayaan.
Shirkada POLY-GCL ayaana qorshaysay inay maraakiib khaas ah shidaalka ugu dhoofiso dalka shiinaha, laga bilaabo 2021ka.
Sidoo kale shirkada POLY-GCL ayaa shirkada China Oil HBP lagashay heshiis ay kubaxayso 313 million dollar oo ay dhuumaha shidaalka ee Hilala iyo Calub ilaa Djibouti kudhisayso.
Mudada 5ta sano ee uhoraysa ayaa lagu wadaa in itoobiya ay shidaalka kahesho aduun lacageed oo kabadan 1 billion dollar sanadkiiba oo faaiido kana baxsan dakhliga,dulsaarka iyo kirada dhulka intaba.
5sano kadibna waxaa lafilayaa in sanadkii 5-7 billion dollar ay kahesho.
Sharciga saami qaybsiga dawlada dhexe iyo deegaanada ee khayraadka dabiiciga ah ee uu golaha federationka JDFI ansixiyay wuxuu sicad uqeexayaa arimahan hoose.
1. Canshuurta dulsaarka ah ee shirkada sidaalka soo saaraysa mudada 25ka sano ah waxaa DDS ugaar ah 50%.
2. Canshuurta wax soosaarka iyo kirada dhulka waxaa DDS ugaar ah 50%.
3. Faa,iidada laga helo 70% ee wadanka itoobiya uu kahelayo saamiga guud ee wax soosaarka shidaalka ee mudada 25ka sano ah waxaa DDS ugaar ah 50%.
,,Horaan uma jirin wax sharci ah oo qeexaya hanaaka saami qaybsiga deegaanada iyo dawlada dhexe ee khayraadka dabiiciga ah,,
^Marka lagaadho sanadka 2038 faaiidada guud ee kasoo baxda shidaalka waxa DDS gaar unoqon doona 50%, oo markaa waxaa meesha kabixi doona 30% ee shirkadu hada leedahay.
Fg. Arinta saami qaybsiga shirkada iyo tan wadanka dhexdiisa ah mifna kuma koobna Calub iyo Hilala oo kaliya, waxaana jira heshiisyo kale oo gaargaar ah balse jidkan uun maraya.
,,Wixii Fikirkaaga ah Hoos Noogu Reeb,, Mahadsanid.
Somaliland Waa Mucjiso Ku Dhex Taalla Badweyn Dhib Badan – Baarlamaanka Ingiriiska Oo Lagu Soo Qaday Qaddiyadda Somaliland